KU SAABSAN JIANGSU TISCO Warshadaha CO., LTD | JIANGSU TISCO warshadaha CO., LTD
Ahama Steel gariiradda
Bir Daxal Leh
Ahama Profile ahama
JIANGSU TISCO warshadaha CO., LTD waxaa la aasaasay sanadkii 2008, xirfad ku leh soo saarista gariiradda birta, birta saxanka birta, birta birta ahaanta, birta birta ahaanta leh , astaamaha birta aan lahayn iyo alaabada lagu dahaadho. 12-kii sano ee la soo dhaafay, Warshadaha TISCO waxay abuurtay iskaashi istiraatiiji ah shirkado badan oo caan ah oo kor u kaca iyo kuwa hoose sida: MASTEEL, BAOSTEEL, TISCO, ZPSS, RIZHAO, JIGANG, SHOUGANG GROUP, SSAB, JISCO. Waxaan sidoo kale la macaamilnaa alaabada laysku daro iyo alaabada birta ah ee birta ah ee noocyada caanka ah ee adduunka sidaTaxane Inconel, Monel Series, Hastelloy Series, Titanium iyo wixii la mid ah.
Ka dib 12 sano oo horumar deg deg ah, TISCO Industrial waxay noqotay shirkad adeeg bir ah oo casri ah oo ku takhasustay farsamaynta, iibka iyo adeegyada farsamada ee ku saabsan alaabada birta aan lahayn. Warshadaha Tisco waxay leeyihiin qalabka wax lagu farsameeyo birta ee bixiya meheradaha wax lagu farsameeyo ee xirfadda leh:goynta, shiidi, sameynta, alxanka, daaweynta kuleylka, makiinada, iyo buufinta. Intaa waxaa sii dheer, Tisco Industry sidoo kale waxay leedahay xarun farsamo iyo kiimiko casri ah oo lagu baaro alaabada u qalma.
Jiangsu TISCO Warshadaha waxay ka dhisteen 10 xarumood adeega wax soo saar ee Wuxi, Wuhan, Hangzhou, Tianjin, Taiyuan, Zibo, Jingjiang, Tai'an, Jinan iyo Jiaxing ee dalka Shiinaha. Waqtigan xaadirka ah, Tisco Industry wuxuu daboolayaa aag 1 ah50,000㎡waxayna leedahay 1,300 shaqaalaha. Tisco waxaa ka go'an inuu noqdo "processing steel iyo xarunta bixinta ee warshadaha wax soo saarka"iyo"supermarket supermarket bir bir ah"Shiinaha. Hal-abuurnimada iyo raacdada heer sare ka dib, Tisco Industry waxay leedahay shirkado badan oo adduunka caan ka ah, oo leh 100,000 tan birta aan birta ahayn ee keydka ah sanad kasta.
Ganacsigeenu wuu balaaranayaa horumarka joogtada ah ee sanadahan awgood, hadana waxaan dhiseynaa shirkad cusub oo lagu magacaabo Jiangsu TISCO Industrial Co., Ltd. Jiangsu Join Industrial Co., Ltd hada waa laan ka mid ah Jiangsu TISCO Industrial Co., Ltd.
JIANGSU TISCO warshadaha CO., LTD
Ogeysiiska isbedelka xubinta shirkada ...
Macaamiisha Qaaliga ah: Ganacsigeennu wuu sii ballaaranayaa horumarka joogtada ah ee sannadahan awgood. Laga bilaabo Sebtember 2020, waxaan dhiseynaa shirkad cusub oo lagu magacaabo Jiangsu TISCO Industrial Co., Ltd. Jiangsu Join Industrial Co., Ltd hadda waa ...